မမျှော်လင့်ပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သဘာ၀တရားကြီးထဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingမမျှော်လင့်ပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သဘာ၀တရားကြီးထဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ
October 22, 2021 Yan Amazing 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးက သဘာ၀ တရားကြီး ရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ယုန်နားရွက်ပုံစံ ခရမ်းချဉ်သီး
အခု မြင်နေရတာကတော့ စိုက်ခင်းတစ်ခုထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးတွေထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပုံစံနဲ့ ပါလာတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံးပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အပေါ်ဘက် အညှာနေရာလေးမှာ ယုန်နားရွက်ပုံစံလိုမျိုး ဖြစ်နေပြီး သေသေချာချာ ကြည့်ရင်တောင်မှ တမင်ဖန်တီးယူထားသလားလို့တောင် တွေးမိစရာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ မြင့်မားလှတဲ့ နေကြာပန်းများ
နေကြာစိုက်ခင်းထဲကို ရောက်ဖူးသူတွေဆိုရင် နေကြာပင် အမြင့်က လူ တစ်ရပ်လောက် မရှိဘူးဆိုတာ သတိထားမိ ကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် အိမ်တစ်အိမ် မှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ နေကြာပင်တွေကတော့ လူ တစ်ရပ်ထက်တောင် ကျော်တဲ့အပြင် အိမ်ခေါင်မိုး အထိ ရောက်လောက်အောင်ကို မြင့်နေတာကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ တမူထူးနေတဲ့ ပြောင်းဖူး
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့် ထူးထူးခြားခြား တစ်ခုကတော့ ပြောင်းဖူး စိုက်ခင်း တစ်ခုထဲမှာ ပါလာတဲ့ ပြောင်းဖူး တစ်ဖူး ရဲ့ ပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခြား ပြောင်းဖူးတွေလိုမျိုး စီစီရီရီလေး ရှိနေတာမဟုတ်ပဲ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ပုံစံကိုမှ အစေ့အဆံ ကြီးတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ပုံစံထူးလှတဲ့ မှို
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ မကောင်းဆိုးဝါး လက်ချောင်းလို့ အမည်ရတဲ့ မှို အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် ဒီမှိုလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ထည် တစ်ခုလုံးဟာ အဖြူရောင် ဖြစ်ပေမယ့် အခုမြင်နေတဲ့ မှိုကတော့ အပြင်ဘက် ကိုယ်ထည်ပိုင်းက ထူးဆန်းစွာ အဝါရောင် ပုံစံရှိလို့ နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ လိမ်ခေါက်နေတဲ့ သခွားသီး
ဒါကတော့ စိုက်ခင်းတစ်ခုထဲမှာ ပေါက်ပြီး သီးနေတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သခွားသီး ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံမှန်သခွားသီးတွေဟာ ရှည်ရှည်မျောမျော ဖြောင့်စင်းတဲ့ ပုံစံရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခုကတော့ မြွေတွေလိုမျိုး ရစ်ပတ်ခွေပြီး သီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ ဆန်းပြားတဲ့ လီမွန်သီး
ဒါကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးဆန်းတဲ့ လီမွန်သီး ပုံစံလို့ပဲ ပြောရမှာပါ ။ စိုက်ခင်း ပိုင်ရှင်က သူ့ခြံထဲမှာ ပေါက်နေတဲ့ လီမွန်သီး ပုံစံကို အများမြင်သာ အောင် ပုံမှန် လီမွန်သီး တစ်လုံး နဲ့ ယှဉ်ပြထားတာပါ ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံက လီမွန်သီးလို့ ပြောရမှာထက် ငရုတ်သီး အရှည်တောင့် ပုံစံမျိုးနဲ့တောင် သွားပြီး တူနေပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၇ ။ ဘဲငန်း ပုံစံ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ချောင်း
လူတော်တော်များများကတော့ ဒီ သစ်သားလေးကို ကြည့်လိုက်ရင် ဘဲငန်း ပုံစံပေါက်အောင် တမင် ဖန်တီးယူထားတယ်လို့ပဲ ထင်ကြမှာပါ ။ တစ်ကယ်ကတော့ ဒီ သစ်သားလေးဟာ သဘာ၀အတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ ရေမျှောကမ်းတင် သစ်ချောင်း တစ်ချောင်းရဲ့ ပုံကို ရိုက်ကူးထားတာပါတဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၈ ။ လူ တစ်ယောက်လုံးကိုတောင် ဖုံးနိုင်တဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်
အခုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ လယ်သမားကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ စိုက်ခင်းထဲက ဧရာမ ဂေါ်ဖီထုပ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဂေါ်ဖီထုပ်ကြီးက ဘယ်လောက်တောင် ကြီးလဲဆိုရင် ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းကနေ ဒူးခေါင်း အပေါ်လောက်ထိ ဖုံးထားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သဘာ၀တရားကြီးထဲက အရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး ထူးဆန်းတဲ့ အရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com